Vicente del Bosque oo hal arrin kaga digay Kooxda Barcelona – Gool FM
(Spain) 06 Abril 2020. Macalinkii hore kooxda kubadda cagta Real Madrid iyo xulka qaranka Spain ee Vicente del Bosque ayaa ka digay dib ugu soo laabashada Neymar Jr ee naadiga Barcelona xagaaga soo aadan.
Vicente del Bosque ayaa tilmaamay in weeraryahanka reer Brazil aan wali la edbin, isla markaana uu abuuri doono dhibaatooyin inkastoo ay awoodiisa farsamo ay tahay mid aad u sareyso.
Dhinaca kale halyeeyga reer Spain ayaa wuxuu sharaxay in Neymar Jr uu yahay mid ka mid ah ciyaartooyda ugu fiican adduunka xagga farsamada, xilli uu sidoo kale dhaleeceeyay ficilada iyo shaqsiyada Neymar Jr, isagoo carabka ku adkeeyay inuusan ku dayasho fiican u aheyn kubadda cagta adduunka.
Wargeyska “Mondo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Vicente del Bosque, waxaana uu yiri:
“Isagu waa ciyaaryahan aad u adag, aniga ahaan ma ahan qof ku dayasho wanaagsan leh.”
“Ciyaartooy ahaan waa mid aad u fiican, haddii aad i weydiisaan inaan idin sheego 5-ta xiddig ee adduunka ugu fiican, wuxuu qeyb ka yahay liiskeyga, laakiin garoonka dhexdiisa wuxuu iskudayaa inuu khiyaano sameeyo”.
Intaas kaddib Vicente del Bosque ayaa wuxuu ka hadlay xiisaha ciyaartoyda Barcelona ee ku aadan dib u soo laabashada Neymar Jr, wuxuuna yiri:
“Kooxda ayaa ah tan ay tahay inay go’aansato cida ay keeneyso iyo cida ay ka maaranto, muhiim ma ahan in la fiiriyo waxa ay sheegayaan ciyaartoyda, sababtoo ah waxaa jira maareeyayaal isboorti iyo maareeyayaal farsamo, aad bay u adag tahay in ciyaartoy kubadda cagta ah uu si xun uga hadlo saaxiibkiis hore.”